ONLINE REGISTRATION PLATFORM IN MYANMAR - Gevme myanmar
Home/ONLINE REGISTRATION PLATFORM IN MYANMAR
လူကြီးမင်းတို့ Events များတွင် ပွဲအစမှအဆုံးတိုင် အစီစဉ်ကျဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ ?
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ Business Partner တွေ အစရှိသဖြင့် ဖိတ်ကြားလွှာတွေ ဖိတ်တယ်၊ ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေတက်တယ် ဘယ်သူတွေကတော့ မတက်ဘူး ဆိုတဲ့စာရင်းတွေ၊ တစ်ချို ့ဆိုရင် ဖိတ်စာတွေက အစောကြိုပို့ထားတဲ့အတွက် ပွဲရက်ကို မေ့နေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ၊ ပွဲပြီးတဲ့အခါ တက်ရောက်သူတို့ရဲ့
ထင်မြင်ချက်လေးတွေကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါတွေကို အများကြီးမှတ်သားပြီးတော့ ခေါင်းရှုပ်ခံဖို့မလိုပါဘူး။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ Event တွေအတွက် တစ်နေရာထဲမှာ ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖန်တီးပေးမည့် Gevme PLATFORM (Online Ticketing and Registration Platform in Myanmar) လာပါပြီ။
Gevme PLATFORM (Online Registration in Myanmar )ဟာဆိုလို့ရှိရင် feature တစ်ခုချင်းစီကို application တစ်ခုအနေ နဲ့ခွဲခြားတည်ဆောက်ထားပေမယ့် Application
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Gevme PLATFORM (Event Management System) မှာ ဘာတွေစီမံခန့်ခွဲနိုင်လဲ ဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
Email နှင့် website များတွင် facebook, twitter စသည့် Social Media များနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ခြင်း။
ပွဲအတွက် သတင်းအချက်အလက်များပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး Responsive website များလွယ်ကူစွာ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း။
3. EVENT TICKETING
လက်မှတ်ပုံစံတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုး တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း။
Mobile user များ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်သော email ပုံစံများဖန်တီးပေးထားခြင်း။
Mobile ဖုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် အဖွင့်စာမျက်နှာ Web Page များလည်း ပြသထားနိုင်ခြင်း။
Online မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မယ့်သူစာရင်းတွေ ကောက်ယူနိုင်တယ်ခြင်း။
7. EVENTS DATA MANAGEMENT
လူကြီးမင်းရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို အဆင့်ဆင့်လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။
8. ATTENDEES MANAGEMENT
ပွဲတက်ရောက်သူများ၏ အချက်အလက် များအား ကောက်ယူပြီး စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။
ပွဲအတွက် ပရိုမိုးရှင်းကုတ်တွေ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း။
10. CUSTOM FORMS
ရှုပ်ထွေးသည့် တက်ရောက်ခွင့် ပုံစံများအတွက် သီးသန့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားနိုင်ခြင်း။
11. MOBILE CHECK-IN
Mobiles များ Tablets များကို အသုံးပြုပြီး တက်ရောက်လာသူများကို စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်း။
လူအရေအတွက်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသောပွဲများအတွက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ပြုနိုင်ခြင်း။
တက်ရောက်သူများ၏ အချက်အလက်နဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလည်း မှတ်တမ်းများကောက်ယူနိုင်ခြင်း။
14. ONSITE RPINTING
Tickets and Name cards များကို ပွဲကျင်းပရာ နေရာတွင် ချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
15. ANALYTICS & REPORTING
ပွဲအတွက် Reports တွေ၊ Email response တွေပါ တခါတည်း ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ …. လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပွဲတွေအတွက် ဘာကို ခေါင်းစားပြီး အချိန်ကုန်ခံနေမှာလဲ?
Gevme PLATFORM (Online Ticketing and Registration Platform ) ရှိနေပြီပဲ ၊ ကျန်တာတွ မလိုတော့ပါဘူး ။ ကဲ အခုပဲ Sign Up လုပ်လိုက်ကြစို့ဗျာ။
By gcaadmin|2019-11-15T11:10:41+06:30June 21st, 2019|Tags: online registration, online registration myanmar, ONLINE REGISTRATION PLATFORM IN MYANMAR, online registration software, online registration software in myanmar, online registration system in myanmar|0 Comments